Vavaka mafy ho an'ny mpisolovava ary ny mpitsara ho an'ny raharaham-pitsarana - Fivavahana
verizon iphone hotspot tsy mandeha
ny fomba fanaovana fitbit hita amin'ny Bluetooth
mainty ny efijery iphone-ko fa mandeha ny telefaona
bateria iphone 6s vaovao mandao haingana
Vavaka ho an'ny mpisolovava sy mpitsara . Vavaka ho an'ny raharaham-pitsarana.
Vavaka ho an'ny fitsarana.Ny olana ara-dalàna dia a raharaha matotra ; miankina betsaka amin'ny zava-mitranga any, ka tsy maintsy mangataka isika Fanampian'Andriamanitra mahatoky , mba ho tonga lafatra daholo ny zava-drehetra mikoriana ny zava-drehetra ary tena fahombiazana ho anao. Amin'ity indray mitoraka ity dia hanome anao vavaka mahery vaika izahay izay tsy maintsy atao amin'ny fitiavana sy ny finoana be. Tadidio mandrakariva fa Andriamanitra no Mpitsara Marina, Jesosy momba anao. Iza no manohitra anao?
Ity vavaka ity dia hanampy anao amin'izany fitsarana izany mba hahatonga ny zava-drehetra mankasitraka anao ary handeha tsara.
Vavaka hahazoana fandresena
Ry Andriamanitro raiko ô, mangataka fanampiana aminao ilaiko aho handreseko izao didim-pitsarana izao, fa eo anilako ny fitiavanao ary manampy ahy ny zava-drehetra ho ahy, ny tsara indrindra noho ny olona fantatrao ny zava-nitranga, ny tsara indrindra noho ny olona rehetra azonao atao manenjika, fantatrao izay nataon'izy ireo tamiko ary izaho irery olona iharan'izany ny toe-javatra, ianao no raiko malalako, mpampianatra ahy, namako akaiky indrindra, mangataka aminao aho mba hanampy ahy amin'ity toerana ity.
Izaho dia olona fitiavana izay velona mandritra ny fiainana, ho an'ny fitiavana, hanampy ny hafa, ampio aho hiala amin'ity toe-javatra mahatsiravina ity izay tsy mamela ahy hiaina izay tsy mahatonga ahy ho milamina . Ray Jesosy ô, miaraha amiko ary ho Mpitsara Marina, minamana, namako ary mpisolovava ahy tsara indrindra, tsy misy olona tsara noho ianao miaro ahy.
Ny mpampianatra ahy, ry malalako, malalako mpiaro ny tsara, Mangataka aminao aho amin'ny fanampiana ilaiko handresena ity fitsapana ity, mba hilamina ny zava-drehetra ary hanafaka ahy ny marina, fa ny fitiavana an'Andriamanitra no Mpanolo-tsaina tsara indrindra, ho amintsika tsara sy sambatra farany, rehefa hitondra ny mpitsara dia ianao no hiteny amin'ny alalany.
Fantatro fa indraindray ianao dia manao fahadisoana, fa ny zavatra tsy mandeha foana araka ny itiavanao azy, fa fantatro koa fa afaka miantehitra aminao eo anilako aho ampio aho , tsy isalasalana fa ianao no heriko amin'ity fizotran'ny asa rehetra ity, mangataka aminao aho anio mba hanamafisana ny fahatsapako mahita mihoatra ny hita, asehoy ahy ny herinao, ny herinao, omeo ahy ireo fitaovana handroso.
Ny fitiavan'Andriamanitra dia afaka manao ny zavatra rehetra, anio dia mangataka fanampiana sy fiarovana aminao amin'Andriamanitra aho, mangataka aminao avy amin'ny fitiavana ny tanjakao avo aho mba hanome ahy ireo fitaovana ilaina.
Ry Andriamanitro malalako, ianao dia ampahany manan-danja amin'ity ady ity, ady ara-pientanam-po, ara-panahy ary ara-dalàna, izay ataoko ny voninahitrao ary fitiavana, manaraha ahy amin'ity ady ity mameno ahy tanjaka, hery, fitiavana ary fiainana, te-hiankohoka eo anatrehanao foana aho Andriamanitra lehibe satria mino aho fa tsy misy isalasalana fa tsy misy roa toa anao.
Matoky anao aho, eo am-pelatananao, apetrako ity didim-pitsarana ity, tompoko satria azoko antoka fa tsy misy tsara noho ianao miaraka amiko, avy amin'ny fitiavana, avy amin'ny HERY ary avy amin'ny finoana, ny maha-eo ahy sy eo akaikinao dia mitovy, manome voninahitra ny tenako aho, ary feno fankasitrahana aho satria vita izany, vita io, vita! Misaotra, misaotra, misaotra.
Ny tena tanjon'ny fitsarana dia ny handraisan'ny mpitsara fanapahan-kevitra momba ny raharaha eo amin'ny roa tonta. Amin'ny maha Kristiana dia i Jesosy Kristy no mpiaro antsika lehibe indrindra (1 Jaona 2: 1-2).
Salamo 27: 1-2,
Jehovah no fanazavana ahy sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Iaveh no herin'ny fiainako, iza no hatahorako? Raha tonga tamiko ny ratsy fanahy, dia ny fahavaloko sy ny fahavaloko hihinana ny nofoko, dia tafintohina izy ka lavo.
Vavaka handresena ny fitsaram-bahoaka rehetra
Fitsarana ny mpitsara
Avy eo ity vavaka ity dia tarihina mivantana mba handresena ireo fitsapana misy anao.
Manantona anao Jesosy, Mpamonjy sy Mpanavotra anao tsara aho,
Tompon'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana, mpitsara mahery sy marina,
mangataka aminao aho mba omeo ahy ny sitrakao masina
ary miangavy anao hanome ahy ny tso-dranonao sy ny fanampianao
amin'ny fotoam-pitsapana sy fahantrana,
mahatsiaro irery sy tsy afa-manoatra aho,
satria ny tsy rariny nanodidina ahy
sy ny olana iainako anio
ataovy mijaly aho ary fenoy ahiahy.
Manararaotra ny fahalalahan-tananao, ny fitiavanao lehibe aho,
ny famindram-ponao, ny fahamarinanao sy ny fahazavanao,
mangataka anao hamporisika sy hitarika ny foko
mba hahafahako miady mafy
amin'ireo rehetra te-hahita ahy ratsy;
atsipazo ny herinao sy ny voninahitrao
ho an'ireo izay hitsara ahy,
mandray fanapahan-kevitra tsara amin'ny fahitsiana sy fahamarinana,
ary ny zanak'olombelona sy ny fahalalahan-tanana dia be ao am-pony
tamin'ny fotoana namoahana ny sazin'izy ireo,
Miangavy anao aho, fenoy fahatakarana sy fangorahana izy ireo
ka mahasoa ahy izy ireo ary tsara amiko ny didinao.
Ianao, Tompoko, Mpanjakan'ny fahamarinana sy Tompon'ny fiadanana,
ataovy maharitra ny Fahamarinana masina,
omeo fanampiana aho amin'ity toe-javatra sarotra lalovako ity:
Omeo mazava sy mamela heloka aho Tompoko,
ary omeo hery aho tsy hanao ireo hadisoana ireo intsony.
Ataovy fialofako ny tratranao matanjaka sy mahery
Ka tsy hahita ahy ny mason'ny fahavaloko
ary tsy afaka manao ratsy na ratsy amiko izy ireo.
Omeo ahy ny herinao amin'ny maha mpitsara marina anao hiadiana amin'ny tsy rariny
ary raiso ny fanolorako tena atolotro anao amin'ny fonao.
Ny fahamarinana dia natao ho an'ny rehetra mandrakizay.
Omeo ahy ny fahasoavana handray ny hazavanao
ary mendrika ny fanampianao sy ny fiarovanao.
Vavaka alohan'ny fotoam-pitsarana
Mety hahasoa ny vavaka raha atao amin'ny finiavana sy fikirizana izany. raha manaraka ity vavaka manaraka ity dia mety hitondra ny valiny andrasana.
Mpitsara marina indrindra,
fa ny vatako tsy misolelaka, ary ny rako tsy latsaka.
Na aiza na aiza alehako dia mitazona ahy ny tananao.
Enga anie ireo izay te hahita ahy ratsy dia hanana maso fa tsy hahita ahy,
Raha manana fitaovam-piadiana ianao, dia aza mandratra ahy, ary aza manantona ahy amin'ny tsy rariny.
Enga anie aho nofonosina amin'ny lamba voasarona Jesosy,
mba tsy ho maratra na hovonoina,
ary aza manolotra ahy ho amin'ny faharesen'ny fonja.
Amin'ny alàlan'ny fihaonan'ilay Ray,
Zanaka sy Fanahy Masina.
Vavaka hialana tsara amin'ny fitsapana
Ny fandehanana any amin'ny tribonaly raha mandray anjara mivantana amin'ilay olana dia mety ho iray amin'ireo toe-javatra ratsy indrindra amin'ny fiainan'ny olona iray, ho azy ireo no anehoanay vavaka ho anao amin'ireo karazana toe-javatra etsy ambany ireo.
Mahery, mahery fo, tsy resy, Tompoko lehibe,
Matahotra ianao amin'ny ady, mpiaro anao ary mpanaraka ny fahamarinana mahatoky,
Ampio aho handresy amin'ity adiko mahery ataoko ity.
Mpiaro matanjaka amin'ny antony marina sy andriana,
Mila anao aho, ary ho azy ireo no iangaviako anao amin'izao fotoan-dehibe izao,
ka tonga amiko ny orinasanao,
ary rehefa milaza ny fahavalo handresy amin'ny ady,
toerana tsara daholo amiko ary ahy ny fandresena.
mitondra ny herin'ny tsara,
Enga anie ka hamirapiratra amin'ny aloky ny famoizam-po ny famirapiratan'ny sabatrao,
satria kivy ny antsoko ary tsy manohana ahy ny fahamarinana.
Komandin'ny ady arivo anio, miantso anao aho,
hahatratra ny fandresena ary hanao fitsarana ho ahy.